၁။ စာပေအပေါ်တွင်ပညာရေး ၄.ဝ ၏ သက်ရောက်မှု Impact of Education On Literature) (9.11.2019).
.၂။ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ (Education Reforms)(10.11.2019).
၃။ ဘက်စုံပညာရေး (All Round Education) (11.11.2019 နံနက်ပိုင်း)
၄။ မြန်မာ့ပညာရေး ပြောင်းလဲမှုများ၏ အရွေ့ (Direction of Myanmar Education Changes)(11.11.2019 ညနေပိုင်း) တို့ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရသည်။
အထူးသဖြင့် ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင် အများစု စိတ်ဝင်စားစွာ တက်ရောက်ပါဝင်ဆွေးနွေးသည်ကို တွေ့ရသည်။ စာရေးသူ ပါဝင်ဆွေးနွေးရသည့် မြန်မာ့ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရွေ့ (ဝါ) လားရာတွင် ဆရာဦးနေအုပ် (စိန်ပေါလ်)၊ ဆရာမြတ်ဝေတိုး (ပညာရေး) နှင့် Moderator အဖြစ် ဒေါက်တာတင်အောင်ရွှေ (သုတေသီ)တို့ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
ဧရာဝတီစာပေပွဲတော်တွင် နေ့အလိုက် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများကို ကျင်းပရာတွင် အဓိကအခက်အခဲမှာ အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ စာတမ်းရှင်များအတွက် အချိန်တစ်နာရီမှာ သင့်တော်သော်လည်း ပညာရှင်လေး၊ ငါးဦး ပါဝင်ဆွေးနွေးသည့် အစီအစဉ်များတွင် တစ်နာရီဆိုသည့် အကန့်အသတ်သည် များစွာအဆင်မပြေလှပေ။ တစ်ဦးလျှင် လေးငါးမိနစ်မျှဖြင့် နှစ်ကြိမ်ခန့် (Two Round) သာရကြရာ ပြန်လည်မေးမြန်းသည့် မေးခွန်းများအတွက် ဖြေဆိုရန် အချိန်မရခဲ့ကြပေ။ သို့ဖြစ်၍ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲနှင့် မတူဘဲ မိမိတို့ပြောချင်သည့်အကြောင်း အရာကိုသာပြော၍ အချိန်ပြည့်သွားကာပွဲသိမ်းလိုက်ရသည်က များပေသည်။
စာရေးသူတို့ စကားဝိုင်းတွင်လည်း တစ်ဦးလျှင် ၃-၄ မိနစ်ခန့်အလွန်ဆုံးပြော၍ နှစ်ကြိမ်ခန့်ပြောပြီး နောက်တက်ရောက်လာသူများမှ မေးလာမည့် မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးရန် စီစဉ်ထားကြသည်။ ပထမတစ်ကြိမ်တွင် မော်ဒရိတ်တာ ဒေါက်တာတင်အောင်ရွှေက ပစ္စုပ္ပန်ပညာရေးအကြောင်း ဦးစားပေး၍ ဆွေးနွေးလိုကြောင်း၊ အတိတ်ပညာရေးကို မတူးဆွလိုတော့ကြောင်း သို့ဖြစ်၍ ဆရာကြီးနေအုပ် (စိန်ပေါလ်)က လက်ရှိပညာရေးစနစ်အကြောင်း ပြောပြရန်စတင်သောအခါ ဆရာကြီး ဦးနေအုပ် (စိန်ပေါလ်) က နိုင်ငံတော်ကကြီးမှူး၍ အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (NESP) ကို ယုံကြည်ဖို့လိုကြောင်း၊ မိဘပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်း၍ အားလုံးပါဝင်ရေး (All Inclusive) ကို တိုတိုရှင်းရှင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဒေါက်တာတင်အောင်ရွှေက ပညာရေးစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဘတ်ဂျက်မရှိက အကောင်အထည်ဖော်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ စာရေးသူက ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုတောင်းခံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပေးရန်ဆို၏။ စာရေးသူက ပညာရေးတွင် ဆရာ၊ ကျောင်းသားပြည့်စုံရုံဖြင့် မပြီးနိုင်ကြောင်း၊ တိုးတက်များပြားလာသည့် ကျောင်းသားဦးရေအတွက်လိုအပ်လာသည့် ဆရာ၊ ဆရာမ၊ အဆောက်အအုံ ဖြည့်ဆည်းရန် ဘတ်ဂျက်ရှိဖို့လိုကြောင်း ဘတ်ဂျက်မပြည့်စုံ၍ ဆရာမခန့်နိုင်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံများ မဆောက်နိုင်ခြင်းများ နိုင်ငံအနှံ့ ဒုနှင့်ဒေးရှိကြောင်း၊ သို့သော် ဘတ်ဂျက်များပိုနေ၍ ပြန်အပ်ရကြောင်း သတင်းများကြားရ၍ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်း။ ဆက်လက်၍ KG+ 12 ရဲ့ သင်ရိုးသစ်ပြုစုခြင်း၊ စာအုပ်အသစ်ပြန်ပုံနှိပ်ရခြင်း၊ဆရာများတိုးတက်ခန့်ထားခြင်းအတွက် ဘတ်ဂျက်လိုကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အကူအညီများ ရယူသုံးစွဲနေကြောင်း၊ မလုံလောက်၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှအတိုးနှုန်း သုညရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ချေးယူရန်ကြိုးပမ်းနေမှုအပေါ် ကန့်ကွက်မှုများရှိနေ၍ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း နိုင်ငံတကာမှ ကလေးများကဲ့သို့ အဆင့်မီမီ ပညာရေးစနစ်ကို နည်းပညာဖွံ့ ဖြိုးမှုနှင့်အတူ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှ နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်ပေါင်တန်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တက်သုတ်ရိုက်၍ ပြောလိုက်ရသည်။
Modarator က ပညာရေးမဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း၏ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်နှင့် နှစ်အလိုက် စီမံထားပုံများကို ဆရာမြတ်ဝေတိုး (ပညာရေး တက္ကသိုလ်) အားဆွေးနွေးစေရာတွင် ဆရာမြတ်ဝေတိုးမှာလည်း ပညာရေးကို ထဲထဲဝင်ဝင်ရှိသူပီပီ NESP စီမံကိန်းကို ၂၀၁၆ မှစတင်ကာ၂၀၂၁တွင် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ 2016 တွင် 2021 ကို စတင်ပြောင်းလဲရာမှာ ယခုနှစ်ဆိုလည်း Grade4 နှင့် Grade6တို့ အထိရောက်ရှိနေကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားသည်။
နောက်တစ်ကျော့အနေနှင့် ဆရာကြီးဦးနေအုပ်မှစ၍ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများ၏ စိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားများဆွေးနွေးစေရာ ဆရာကြီးဦးနေအုပ် (စိန်ပေါလ်)က အကြောင်းအရာမှာ လွန်စွာကျယ်ပြန့်ကြောင်း မိမိတို့ရှင်းပြသည်ထက် မေးခွန်းများမေး၍ အဖြေရှာခြင်းကပို၍ အကျိုးရှိမည်ဖြစ်၍ ပရိသတ်ထဲမှ မေးခွန်းများမေးခွင့်ပြုလိုက်သည်။ မေးခွန်းများရမည့်အချိန်အတွင်း မေးကြပါသည်။
- လက်ရှိပညာရေးစနစ်အပေါ် အောင်မြင်စေ မည့်နည်းလမ်းများ၊
- အလွန်ကျက်စနစ် ဖြစ်နေရခြင်းမှာ နည်းစနစ် မှားယွင်းနေခြင်း၊ (ဖောင်တော်ဦး ဆရာတော်)
- ကျက်ကျူကေးရှင်းနှင့် ကျက်တက္ကသိုလ် အဆင့်လွန်မြောက်နိုင်မလား၊
ဆရာကြီးဦးနေအုပ်ကမူ နိုင်ငံတော်မှ ကြီးမှူး၍ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ အလွတ်ကျက်စနစ်မှ လွတ်မြောက်၍ Critical Thinking,Creative Thinking နှင့် Inovation များရှိလာစေရန် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊
စာရေးသူကမူ ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းကို ယုံကြည်ရန်လိုကြောင်း၊ မိဘများ မယုံကြည်ကြကြောင်း၊ KG တန်းတွင် စာမသင်၍ စိုးရိမ်နေကြရန်မလိုကြောင်း၊ ကလေးများ ဗလငါးတန်ဖွံ့ ဖြိုးဖို့ လွတ်လပ်မှုပေးထားကြောင်း၊ မိဘများစိုးရိမ်ကာ အိမ်တွင်ဆရာ၊ ဆရာမများခေါ်၍ ကျူရှင်သင်နေကြောင်း၊ KG တန်းများကို စာသင်နေကြောင်း၊ ယင်းစနစ်မှားယွင်းကြောင်း၊ မိဘများကိုယ်တိုင် Mind Set အပြုပြင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊
မန္တလေးမြို့မှ ဖောင်တော်ဦးဆရာတော်က အင်္ဂလိပ်လိုသင်၍၊ မြန်မာလိုသင်၍ ပိုတတ်သည် သို့မဟုတ် မတတ်ဖြစ်သည်ဆိုသည်မှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ မည်သည့်ဘာသာရပ်ဖြင့် သင်ကြားသည်ဖြစ်စေ၊ တတ်မြောက်နားလည်အောင် မသင်နိုင်၍ မတတ်ကြောင်း၊ မတတ်၍ အလွတ်ကျက်နေကြကြောင်း၊ တတ်အောင် မသင်နိုင်လျှင် အင်္ဂလိပ်စာကို အလွတ်ကျက်နေ သကဲ့သို့ မြန်မာစာကိုလည်း အလွတ်ကျက်နေကြကြောင်း၊ အဓိကမှာနည်းစနစ်မှားနေကြောင်း ပြုပြင်ရန်လိုကြောင်း၊
ဆရာဦးနေအုပ်(စိန်ပေါလ်)က မိမိမှာ အင်္ဂလိပ်သင်သည့် ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း မြန်မာလို သင်ရန်ကိုမူ မကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ကောင်းပါကြောင်း၊ သို့သော် အင်္ဂလိပ်လိုပါ တတ်ကျွမ်းလျှင်မူနိုင်ငံတကာ အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်း ပြောသွား၏။
ဆရာမကြီးတစ်ဦးကမူ ကမ္ဘာ့အဆင့်ဖြစ်သည့် Education 4.0 ကို မည်သို့မည်ပုံရောက်နိုင်မလဲဆိုသည့် မေးခွန်းအတွက်မူ ယခုအခါမှသာ ပညာရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းစနစ် စတင်နေရသည်ဖြစ်၍ ယခုရေတွင်းတူး ယခုရေကြည်မသောက်နိုင်ကြောင်း၊ သင်ကြားမှု သင်ယူပိုမိုလွယ်ကူတတ်မြောက်စေရန် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများကိုပင်သင်ကြားနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ဆရာမြတ်ဝေတိုး (ပညာရေး တက္ကသိုလ်)က အကျဉ်းချုပ် ရှင်းလင်းသွားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ အချိန်ရမည်ဆိုလျှင်မေးမြန်းချင်သူများ တွေ့ရှိနေသေးသည်။ သက်ဆိုင်ရာမှအချိန် ပြည့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသတိပေးနေလေပြီ။ သို့ဖြစ်၍ ယခုကဲ့သို့ အားတက်သရော ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုကို ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။ ပညာရေးတွင် ထဲထဲဝင်ဝင်ရှိသူ အများအပြားပါဝင်သည်ကို သတိထားမိသည်။ လက်ရှိပညာရေးစနစ်အပေါ် အားမလိုအားမရဖြစ်နေ ကြသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ မေးမြန်းသူတို့ကျေနပ်လောက်အောင် အဖြေမပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ အကြောင်းမှာ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်လာသည်မှာ လေးနှစ်တာကာလထဲသို့ရောက်နေသော်လည်း ဆရာ၊ ဆရာမ မပြည့်စုံခြင်း၊ နည်းပြသင်တန်းများ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မပေးနိုင်သေးခြင်း၊ မိဘများနားမလည်နိုင်သေးခြင်း၊ ဘတ်ဂျက် မလုံလောက်ခြင်းစသည့် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သာ အချိန်ရခဲ့လျှင် ကောင်းမွန်သော အတွေးအမြင်များရနိုင်မည်ထင်ပါသည်။ သို့သော် မိမိတို့သား၊ သမီးများနှင့် နောင်မျိုးဆက်များအတွက်မူ အောက်ပါအတိုင်း ချပြပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထားစရာမရှိသူတို့၏ သား၊ သမီးများ နိုင်ငံခြားတွင် ပျော်ရွှင်စွာပညာသင်ကြားနေချိန်တွင် စားစရာမရှိသည့် မိမိတို့ပြည်သူ ပြည်သားများ၏ သား၊ သမီးများ အဆင့်မီ ပညာရေးစနစ်ဖန်တီးနိုင်ရန် ဘတ်ဂျက်ပိုမိုရရှိနိုင်ရေး ဝိုင်းဝန်းအားပေး ထောက်ခံကြရန် တွန်းအားပေးရင်း အခမ်းအနားကို နိဂုံးချုပ်ခဲ့ရပါသည်။